Kule nqaku, uya kufunda konke malunga 8 yeekomityi, intsingiselo kunye nokunye okuninzi. Ke siyakumema ukuba usijoyine kuba iya kuba sisihloko esinomdla kakhulu.
1 8 yeekomityi
2 Ijikelezisa 8 yeekomityi
2.1 Inkcazo ye-8 yeekomityi
3 8 yeekomityi Umgangatho waseSpain
4 8 yeekomityi zetarot Marseille
El 8 yeekomityi tarot, Yeyeseti ye-arcana encinci. Inombolo yakhe 8 iyagqibelela kwaye ifanekisela infinito ngokuthe nkqo. Inxulunyaniswa nenani eliphakathi koMhlaba kunye namanqanaba asezulwini.
Le arcana incinci idibene necandelo laManzi, iza kusinika ubugqi, iimvakalelo zomonde, ubuntununtunu kunye nokuqonda. Amanqanaba asezulwini kule mbalelwano abonisa iinjongo eziphakamileyo kakhulu kwaye, ukuba kufikelelwe ngendlela elungileyo, anokufezekiswa.
Kubalulekile ukukhankanya ukuba i-arcana encinci ibonelela ngombono wobomi bemihla ngemihla, kwaye i-8 yeekomityi ifuna ibhalansi engekafumaneki, ke ngoko ibalaselisa esi sidingo sokuyifumana ngandlela thile.
Ubonisa ukungoneliseki, kodwa akancami azame ukufumana intsingiselo kwinto ayenzayo nakwinto ayifunayo, ngeendlela ezahlukeneyo ezinokuthi ziboniswe.
Ijikelezisa 8 yeekomityi
Ukuba 8 yeekomityi tarot ivela nkqo, ibonisa ukuba lixesha lokufumana indlela esinika uxolo lwengqondo kunye nolwaneliseko.
Eli khadi liza kubonisa ukukhangela ngokomoya kwaye lifanekisela ukuphoxeka okunokuviwa kukusilela kunye nokungaqiniseki ebomini.
Ukuba ikhadi libonakala libuye umva, oko kubonisa ukuba uphakathi kwesigqibo kwaye awazi ukuba yeyiphi indlela echanekileyo.
Uziva uloyiko lokungaziwa, nangona ngaphakathi kukho umnqweno wotshintsho olusondeleyo, kodwa ukuba ngokubonakalisa kuyimfuneko ukuyithatha ngaphandle koloyiko.
Ikwabonisa ukuba ukwixesha lobomi bakho apho kungekho ndlela yakuphuma kwiingcinga zokudakumba, ezikhokelela ekubeni ungafumani ndlela yokuphuma kwiimeko ezinzima nezintsonkothileyo okwangoku.
Awufuni kujongana nayo nayiphi na into eza kuyisombulula ngenxa yokoyika utshintsho abanokuluvelisa kwaye, ukhetha ukuhlala nabo kunokuba ubatshintshe.
Ekufundeni iileta, oko kunokuthetha ukuba ufuna ukufumana indlela entsha eza kubuyisela ukuzola ngokweemvakalelo, ufuna ukushiya ngasemva ubudlelwane, umsebenzi okanye ubaleke kubantu abangafuniyo impilo-ntle yakho.
Ekufundweni kwamakhadi ukubona inqwelomoya yothando, kubonisa ukuba kufanelekile ukuba kufumaneke imali eseleyo nesibini, unxibelelwano kufuneka lufezekiswe ukuze kufikelelwe ekuqondaneni kwaye ukuba oku akuphumelelanga, kubalulekile ukuqaphela ukuhamba.
Kuba inxulunyaniswe ne-intuition, kuyacetyiswa ukuba ukuba ezantsi uziva ukuba lixesha lokuphelisa ubudlelwane obungasebenziyo okanye apho ungafuni ukuba khona, ungabuphelisa kwaye ungazibeki emngciphekweni. Khumbula ukuba ulonwabo lomntu kunye nokulinganisela kwethu ngokweemvakalelo kuza kuqala, kuqala nokuphambili.
Iroli isinika amathuba amatsha, inokubonisa ukunyuswa okutsha, uhambo lweshishini olunokubakho apho yonke into izakuphumelela khona, isivumelwano esizuzisa omabini amaqela, kwanokuphuculwa kwemivuzo notyalo-mali.
Ileta entle kakhulu xa kufikwa kumba wemali, kuba ibonisa iindlela ezinokuthi zinikezelwe ukuze zisincede.
Inkcazo ye-8 yeekomityi
Umzobo onokubonwa kweli khadi le 8 yeekomityi tarotYindoda eshenxa kude kwiiglasi ezingaphambili, zikwimo eyahlukileyo kwaye enye ilahlekile, oko kuthetha ukuba iimvakalelo kunye neminqweno yakhe ayilingani kwaye ufuna ukushenxa kude ukunqanda ukuziva udanile ngakumbi.
Le ndoda ihamba ibonakalise kwaye icinge ngeyona nto ilungele yona, iya ngasezintabeni, amanzi ahambayo abonisa iminqweno neemvakalelo zakhe. Luhambo aluthabathayo eyedwa kwaye kumgama ubonakalisa ukuba ukhangela ukonwaba kwakhe, ezibeka kwindawo yokuqala ngaphandle kobunzima.
Ufuna ukufumana uxolo, uzinzo kunye noxolo ngelixa ufumana ibhalansi kwizenzo zakho. Inyanga ezulwini kubonisa ukuba umendo wakho ukhanyisiwe kwaye uya kuba nakho ukwazi ngayo yonke into oceba ukuyiphucula indlela yakho kobu bumnyama obukwenza ukuba ungabonakali kwabanye.
Ngokuqinisekileyo ungathanda ukufunda inqaku lethu malunga Ezisixhenxe zegolideKuya kufuneka ufake ikhonkco.
8 yeekomityi Umgangatho waseSpain
El 8 yeekomityi kwi Umgangatho wespanish, ikwimo yayo elungileyo, ibonisa ukuba ufuna ukwenza uphando ngokomoya apho sinokufumana khona iimpendulo kwizinto ezisixhalabisayo ebesoloko sizile.
Ukuba ibonakala iguqukile, inxulunyaniswa nokuqonda kunye nomnqweno wokusuka kuyo yonke into ukuze ucamngce kwaye ubonakalise, ngendlela efanayo ukufumana indlela yokuphuma kwimeko yokungonwabi nokungonwabi esikuyo.
Kwindibaniselwano ekhethekileyo eyahlukileyo, ineentsingiselo ezahlukeneyo:
I-8 yeNdebe kunye ne-Ace yeGolide: Izicwangciso zakho kunye neminqweno yakho yoloyiso kwaye buthathaka utshaba.
8 yeekomityi kunye I-Ace yeekomityi: babonisa ukuba kukho uzinzo kusapho nasekhaya, ngemvakalelo yokugcwala.
I-8 yeekomityi kunye ne-Ace yeWands: kufuneka kwenziwe ucoceko oluvumela ukulingana neemvakalelo zangaphakathi, kususwe imikhwa emibi.
Iikomityi ezi-8 ze Inca yesipeyidi: Ingathetha ukuqala kobudlelwane obutsha bezothando okanye ukufikelela kuzinzo kunye neqabane onalo, ukufikelela kunxibelelwano olusebenzayo.
8 yeekomityi zetarot Marseille
El 8 yeekomityi kwi Tarot yaseMarseille, ikwimo yayo elungileyo, ayibonisi sibonakaliso silungileyo, kodwa ayisiyonto imbi, kuba ikhadi elikwi-archetype yalo yoqobo libonisa iimpawu zosizi kunye nokungalingani.
Ke ngoko, xa itolikwa kwiMarseilles tarot, inxulunyaniswa nomnqweno wokufuna iindlela ezintsha ezivumela ulungelelwaniso kunye nolwaneliseko lomntu ukuba lufezekiswe kwiindidi ezithile zeemeko.
Ibonisa ithemba, ukuba asikakufumani oko sikufunayo kwimihla yethu, sinokukhetha iindlela ezahlukeneyo esivumela ukuba sifumane indlela yokufezekisa iinjongo zethu.
Kwimo yayo eguqulweyo, ibonisa ukudideka kwindlela emayihanjwe, ke oko kubonisa ulwazi lokuziqonda kunye nokufunda ngamanyathelo ekufuneka siwathathe ngalo mzuzu ubonisiweyo.
Ngesi sizathu, ayithethi nto imbi, ngaxa lithile sonke sinokuziva sikhathazekile zizinto esingazifumaniyo kwaye oko akuthethi ukuba sikushiye ecaleni.